5XDC Belt mhando yekuchenesa akateedzana
CLX magineti esarudzo graders
PJ akateedzera kupurinda muchina
Iyo QSC chikamu chedombo ...
Hexagonal waya netting mesh welding kugadzira muchina
Yakakura hexagonal net muchina inyanzvi yemadhiza ekugadzira hexagonal net, izvo zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumafuta peturu, kuvaka, kubereka, makemikari indasitiri, kupisa mapaipi uye mamwe mapaipi emumbure wekuputira, asiwo nekuda kwefenzi, yekugara yakatarisana nekudzivirira.
Muchina uyu unoshandisa chimiro chakasiyana uye chaicho giraidhi yezvinhu, zvimisikidzwa, pasi pekuwedzera kwekukasira, zvichikonzera kusangana kwakaringana kusanzwisisika nekubhururuka kwekukwirirana kubatana kuita matanho uye giredhi yezvinhu. Iwo marefu anodzora uye anotenderera anokanganisa angoni anokwanisa kugadziriswa asingamiriri. Isingamhanyi kumhanya mhanya yakakodzera kune yakatenderera zviyo mhando, kunyanya pakugadzirisa soya bhinzi. Imwe nguva yekusarudzika: dombo, jecha, zvimedu zvakaputsika uye zvimwe zvisina kujairika.
TDSL, TDSQ nhare yebhandi dhiza
Nekuda kwechimiro chemaitiro akareruka, mutengo wakaderera, kusimba kwakasiyana-siyana kwezvinhu, kugadziriswa kuri nyore, uye nekuburitsa kunogona kusangana nemamiriro akajairwa, kuitira kuti uve yerudzi rweweruzhinji runodzvinyirira. Zvinoenderana nezvinodiwa zveimwe chete, yakawanda kana nezvimwe zvinoshandiswaereketa zvakatenderedza kana zvinosimudzira hurongwa.
PJ polishing muchina kupukuta kurapwa kweakasiyana bhinzi, nyore kufamba, yakanyanya kupukutwa, iine guruva rekubvisa mudziyo.
Muchina wekubatira mbeu
Kuenderera mberi kuwanda zvinhu zvekudya & uye zvinodhaka kudzora; Shandisa banga. Yekumhanyisa centrifugal disc atomization tekinoroji; Magetsi control system ine rakawandisa uye overheat kaviri kudzivirirwa.
3D simbi waya mesh fenzi pombi yekuwachisa
Iyi fenzi mesh welding muchina unotora magetsi & elektroniki synchronous control maitiro, ese maviri akapatsanurwa-matanho eWelding uye nguva yekudziya inoumbwa nedhijitari uye yakabatanidzwa yemagetsi wedunhu. Iyo yekuisa iyo ine mhando mbiri kubata skrini uye bhatani, yakangwara uye inonzwisisika, kamwe ichimanikidza, uye inoparadzanisa welding.
Yakasanganiswa mhando yembeu yakachenesa mutsara
Muchina uyu unofambiswa uye unosanganisa masherufu, isina-kuputsika kukwidziridzwa, Iyo miviri yekuparadzanisa, Chikamu chakasarudzika chegiravhiti, kubviswa kweguruva, giravhiti, Separator uye grader basa. Imwe-time fuction inogona kubvisa Hard ganda, chizi ganda, awn, guruva, kusachena kuchena, chizi mbeu, bud njere, zviyo zvakadyiwa zviyo, nyoro zviyo, gonda chirwere zviyo, dema poda chirwere zviyo, yakakura kusachena uye diki kusachena, etc. At panguva imwe chete iyoyo, zvinhu zvacho zvakakamurwa kuva zvikamu zvidiki uye zvidiki zvidiki, uye zvobva zvadzingwa kubva munzvimbo dzakasiyana.
Yembeu yemhepo inochenesa dzakateedzana
Uyu muchina unoshandiswa kuchenesa midziyo wakabatanidzwa nekuparadzaniswa kwemhepo uye kuongorora. Iyo yekuparadzanisa yemhepo basa remuchina uyu inonyanya kupedzwa neye vertical air screen. Zvinoenderana neiwo aododynamic maitiro ezviyo uye dzakasiyana dzakasiyana dzinomhanya zvezviyo uye zvakasvibiswa, inozadzisa chinangwa chekuparadzanisa nekugadzirisa kumhanya kwekuyerera kwemhepo.
5XZ-5 Gravity Separator (Yakagadzirirwa Elevator)
Muchina uyu wakavakirwa pane zvinyoro-nyoro mune iyo fluidization muitiro uchagadzira musimboti weasidhi uye huwandu hwe deflection phenomenon, nekushongedza mhepo yekumanikidza, nzvimbo yekukwira yehunyanzvi parameter senge zvigadzirwa zvinodzosera zvinhu zvinogadzira delamination, chikamu chehukuru hwekugadzirisa kune chikamu chakadzika, chikamu chidiki chekukwira kumusoro, kuenda kune iyo isina nzvimbo Zone, inogona kunge zvichienderana nezvinodiwa zvegiravhisi yakasiyana midziyo kubva pakasiyana nzira, kuitira kuti uwane chinangwa chekusarudzwa.
Yakasanganiswa mhando chaiyo yegiravhiti yemichero yekuchenesa
Muchina uyu unofambiswa uye unobatanidza masherufu, isina-yakaputswa simiti. Iwo maviri mweya kupatsanura, Sekita yakananga giravhari parutivi, kubviswa kweguruva, giravhiti, splitter uye grader basa. Imwe-time fuction inogona kubvisa Hard ganda, chizi ganda, awn, guruva, kusachena kuchena, chizi mbeu, bud njere, zviyo zvakadyiwa zviyo, nyoro zviyo, gonda chirwere zviyo, dema poda chirwere zviyo, yakakura kusachena uye diki kusachena, etc. At panguva imwe chete iyoyo, zvinhu zvacho zvakakamurwa kuva zvikamu zvidiki uye zvidiki zvidiki, uye zvobva zvadzingwa kubva munzvimbo dzakasiyana.
Iyo QSC iyo chikamu chematombo akateedzana
Muchina uyu unoshandisa zvinoenderana nekuyerera kwemhepo uye vibration furo pazvinhu zvinogadzirisa amplitude nekona yekusimudzira, uye inogona kupatsanura zvakasvibiswa zvakasviba kunge mabwe mumadhadha, kuitira kuti zvigadzirwa zviite nehukuru hukuru kunyura pasi uye kutama kubva kuderera kusvika kumusoro padenga nechiso; izvo zvigadzirwa zvine chikamu chidiki zvinomisikidzwa pamusoro uye kutama kubva kumusoro kusvika pasi, kuitira kuti uwane mugumo wekuparadzanisa. Iyo yekushandisa modhi ine zvakanakira zvekufamba nyore, inogona kushandurwa amplitude uye yakanaka yekubvisa ibwe maitiro.
Nekumhanya kwakakodzera, zviyo uye ivhu rakavhenganiswa rinogona kupfuura nepakavharirwa nzvimbo kuburitsa yakakura yemagineti yemagineti. Nekuda kwesimba rinokwezva rekusimba remagineti yemagineti kana zvigadzirwa uye nevhu zvidhinha zvakakandirwa kunze, kure kure nekukanda kunze kwakasiyana. Mabhonzo uye ivhu zvidhinha zvakateedzana zvakapatsanurwa rimwe nerimwe, kuitira kuti zvibudirire kupatsanurana kwakaringana kwezviyo nemavhu evhu.